चीनमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने तयारी, कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ? « Deshko News
चीनमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने तयारी, कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ?
सरकारले चीनमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने तयारी गरेको छ । चीन सरकारलाई पत्र लेख्दै आगामी शनिबार नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत चीन सरकारलाई नागरिक उद्धार गर्न चाहेको जानकारी गराएको हो। चीनस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि परराष्ट्रले नेपाली स्वेदश फर्काउन आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
योसँगै चीनमा प्राणघातक कोरोना भाइरसको त्रासमा रहेका नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किने निश्चित भएको छ। चीनमा रहेका नेपाली ल्याउन फागुन ३ गते नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज त्यसतर्फ पठाइने भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली नागरिक उद्धार गर्न आवश्यक सबै प्रक्रिया थाल्न परराष्ट्र, स्वास्थ्य, पर्यटन र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार कोरोनाको केन्द्रबिन्दु वुहानसहित चीनका अन्य सहरमा रहेका नेपालीलाई फर्काउन लागिएको छ । वुउहानमा ६२ जना छन् भने अन्य स्थानहरूमा ११८ नेपाली छन् ।
उता चीनले नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार चिकित्सकीय निगरानीको व्यवस्था भएपछि मात्र नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने अनुमति दिने जानकारी गराएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताएका छन्। त्यसअनुसार नेपालमा पनि तयारी भइसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठको दाबी छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठकाअनुसार फर्काइन लागिएका १८० नेपालीमध्ये कसैलाई पनि कोरोना संक्रमण छैन । तैपनि उनीहरूलाई ल्याउनेबित्तिकै घर नपठाई पहिले क्वारेन्टाइनमा राखिने उनले बताए।